Universal Online TV | कसले जित्ला गोल्डेन बुट ? कसले जित्ला गोल्डेन बुट ?
प्रकाशित मिती: ११ असार २०७५, सोमबार
फिफा विश्वकपमा कपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीलाई गोल्डेन बुटको अवार्ड दिने गरिएको छ। यो अवार्डका लागि विश्वभरका स्टार खेलाडीबीच कडा टक्कर हुने गरेको छ । रसियामा जारी विश्वकपमा यस्तै केही चर्चित खेलाडी छन्, जो आफ्नो टिमलाई जितका साथसाथ यस अवार्डलाई आफ्नो नाममा पार्न पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
गोल्डेन बुटको दौडमा को कति अगाडि ?
१. ह्यारी केन (इङ्ल्यान्ड)-५ गोल
इङ्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन यस समय उत्कृष्ट फर्ममा देखिएका छन् । टोटनह्यामबाट व्यवासयिक फुटबल खेल्दै आएका उनले पनामाविरुद्ध आइतवार ह्याट्रिक गरे । यो ह्याट्रिकसँगै यस विश्वकपमा उनले आफ्नो गोल स‌ंख्या ५ बनाएका छन् । यसभन्दा अघि उनले समूह चरणको पहिलो खेलमा ट्यूनिशियाविरुद्ध दुई गोल गरेका थिए ।
केन यस प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । यसका अलावा उनी यस विश्वकपमा ह्याट्रिक गर्ने दोस्रो खेलाडी भएका छन् । यसअघि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यो विश्वकपमा पहिलो ह्याट्रिक गरेका थिए ।
२. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पोर्चुगल)-४ गोल
पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि फिफा विश्वकप २०१८ मा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा अहिले दोस्रो नम्बरमा छन् । उनको नाममा चार गोल रहेको छ।
यसमा स्पेनविरुद्ध उनले गरेको यो विश्वकपको पहिलो ह्याट्रिक पनि सामेल छ । रोनाल्डो एक्लैको बलमा पोर्चुगल आफ्नो पहिलो खेलमा स्पेनलाई बराबरीमा रोक्न सफल भएको थियो । यसका अलावा रोनाल्डोलले मोरक्कोविरुद्ध पनि एक गोल गरेर टिमलाई जिताएका थिए ।
३. रोमेलु लुकाकु (बेल्जियम)- ४ गोल
बेल्जियमका युवा स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकूको नाममा यस विश्वकप प्रतियोगितामा ४ गोल रहेको छ । यसमा पनामाविरुद्धको २ र ट्युनिशियाविरुद्धको दुई गोल पनि सामेल छ। उत्कृष्ट लयमा देखिएका यी फुटबलर गोल्डेन बुट अवार्डका लागि बलियो दाबेदारी पेश गर्दैछन् ।
४. डेनिस चेरिसेभ(रूस)- ३ गोल
रूसका एट्याकिङ मिड फिल्डर डेनिस चेरिसेभले यस विश्वकपमा ३ गोल गरेका छन् । उनी अहिले फिफा विश्वकप २०१८ मा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने फुटबलरको सूचीमा चौथो नम्बरमा छन् । चेरिसेभले उद्घाटन खेलमा रूसलाई साउदी अरबविरुद्ध ५-० ले जिताउन अहम् भूमिका खेले । यो विश्वकपको इतिहासमा रूसको दोस्रो ठुलो जित हव । डेनिस चेरिसेभलले साउदी अरबविरुद्ध दुई र इजिप्टविरुद्ध एक गोल गरेका थिए ।
५ डिएगो कोस्टा (स्पेन)-३ गोल
स्पेनका स्टार फुटबलर डिएगो कोस्टाले यस विश्वकपमा३ गोल गरिसकेका छन् । पोर्चुगलविरुद्ध यी स्ट्राइकरले दुई गोल हानेका थिए । त्यसैगरी इरानविरुद्ध एक गोल गरे । उनलाई यो विश्वकपमा गोल्डेन बुटको दौडमा प्रबल दावेदार हुन सक्छन् ।